လုပ်နည်းကလွယ်ပါတယ်... ပန်းဂေါ်ဖီကို white rice vinegar , sugar , salt နဲ့ ရောမွှေပြီး အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီး နှစ်နာရီ လောက်နှပ်ထား ... ဆီကို ကျက်အောင်ချက်ပြီးမီးပိတ်ကာ ငရုတ်သီးစိမ်းမှုန့်၊ မဆလာကိုထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ အနံ့မွှေးပြီးဆို ပန်းကန်လုံးမှာထည့်ပြီးအအေးခံထား။ ကြက်သွန်ဖြူကို လှီးထားပါ။ အားလုံးကိုရောမွှေလိုက်ရင် ချက်ချင်းစားလို့ရတဲ့ သနပ်ရပါပြီ :) ..... ပန်းဂေါ်ဖီကို နှပ်ထားပြီးရင် ထွက်လာတဲ့ အရည်ကို သွန်လိုက်နော် ....
Posted by BabyAngle at 07:202comments:
ဘလော့လေးနဲ့ဝေးနေတာ..အတော်လေးကြာသွားပြီနော်… စိတ်ကအမြဲရောက်နေပါတယ်… blog လေးကနေတဆင့် ခင်မင်ရတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုလည်းလွမ်းနေပါတယ်… ရန်ကုန်ရောက်ခါစ လုပ်စရာအလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာကြောင့် စိတ်သာရောက်ခဲ့ပြီး ဘလော့ပေါ်ကို တက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလေ….
ရန်ကုန်ရောက်တော့ အမေ့လက်ရာတွေပဲစားနေရတော့ ဟင်းချက်နည်းတွေတောင် မေ့ချင်နေပြီ… :P
အဲဒီတော့ ခရီးထွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲ ရေးတော့မယ်နော်…. ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ပထမဆုံးထွက်ဖြစ်ခဲ့တာ ကတော့ နှစ်ညအိပ် သုံးရက် ချောင်းသာခရီးစဉ်လေးပါပဲ….
ပထမဆုံး ချောင်းသာက ဟိုတယ်တွေကို ဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီး booking လုပ်တော့ ခရီးသွားရာသီချိန်ဖြစ်နေတော့… ဟိုတယ်တော်တော်များများ မရတော့ဘူး.. နောက်တခုအခက်အခဲက ဖုန်းတွေ ဆက်လို့မရတာပဲ… နောက်ဆုံးတော့ Golden Beach Hotel မှာ ရတယ်… ကမ်းခြေဘက်တော့မရဘူး… Garden View ဘန်ဂလိုလေးပဲရတယ်… တရက်ကို 44000 နဲ့ breakfast ပါပါတယ်လေ…. Hotel ရပြီဆိုတော့ Golden Star က ကားလက်မှတ်ကိုစုံစမ်းတော့ တစ်ယောက်ကို 15000 တဲ့… အိမ်အထိ ကားလက်မှတ်လာပို့ပေးတယ်… ကားက ည ၉နာရီကျော်ကျော်လောက် ထွက်တယ်… မနက် ၅း၃၀ လောက် ချောင်းသာရောက်သွားတယ်… ကံကောင်းချင်တော့ အခန်းက အားနေတော့ ချက်ချင်း check in ၀င်လို့ရသွားတယ်.. golden beach hotel က ၀န်ထမ်းတွေတော်တော်လေး service ကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်.. spa လည်းရှိတယ်လေ.. one section ကို 5000 ပဲပေးရတယ်… breakfast ကလည်း buffet မြန်မာအစားစာ၊ ဘိုစာ အကုန်ပါတယ်…
Lunch နဲ့ dinner တွေမှာလည်း ဈေးနှုန်းတွေ မဆိုးဘူး… service ပေးတာလည်း အရမ်းကောင်းတယ်…
ကြော်ငြာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး… စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် ၀န်ဆောင်မှုတွေရခဲ့လို့ပါ… သွားမဲ့သူတွေ အတွက် သတင်းပေးတာပါ… နေ့လည်ဘက်တွေ မှာလည်း အေးအေးလူလူနဲ့ အသီးဖျော်ရည်၊ အသုပ်မျိုးစုံကိုလည်း စားလို့ရအောင် ဆိုင်အသေးလေးတစ်ခု ဖွင့်ပေးထားသေးတယ်… သန့်သန့်ရှင်းရှင်း စားလို့ရတာပေါ့… စာတွေ များသွားပြီ… ပုံလေးတွေ ဆက်ကြည့်တော့နော်…
ဒီ mini mart လေးက hotel ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းတဖက်မှာ ရှိတယ်.. ချောင်းသာအမှတ်တယ အကျီင်္တွေနဲ့ အခြားလက်ဆောင်တွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဝယ်လို့ရတယ်လေ...
ရောက်ရောက်ချင်းနေ့က စားတဲ့ ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်နဲ့ seafood tomyum soup
dinner ကတော့ ဂုံးချဉ်စပ်၊ အာလူးသုတ်၊ ကျောက်ပွင့်သုတ်၊ sefood soup
ဂဏန်းချဉ်စပ်၊ စမခြောက်ကြော်သုပ်၊ မုန်ညှင်းခရုဆီကြော်
ဘဲကလေးတွေ တန်းစီပြီး ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ မသိပါဘူး.....
Posted by BabyAngle at 19:074comments: